Plants | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Sarin'ny zavamaniry - mankafy ny natiora amin'ny antso
Pejy maro momba ny zavamaniry
Sarin'ny zavamaniry teratany
Ny zavamaniry, ny voninkazo, ny ahitra ary ny hazo - izy ireo dia ampahany amin'ny toetra mahafinaritra. Ho an'ny olona maro, izy ireo dia fanehoana hatsaran-tarehy ary mamorona tontolo iainana miala sasatra, eny fa na dia eo amin'ny fiainana andavanandro amin'ny 21 aza. Century.
Ny zavamaniry - Ny lafiny tsara indrindra amin'ny natiora
Jereo fotsiny ireo tanàn-dehibe eto an-tany. Na dia any New York City aza, ny renim-pianakaviana lehibe any an-tanàn-dehibe, dia misy oasis maitso matevina amin'ny endrika Central Park.
Ny fisian'ny faritra midadasika any amin'ny iray amin'ireo tanàn-dehibe malaza manerana izao tontolo izao dia ampiasaina ho an'ny valan-java-bary, ary noho izany, tsy misy toerana malalaka ho an'ny toeram-piasana sy trano, mampiseho ny maha zava-dehibe ny zavamaniry sy ny natiora amin'ny ankapobeny.
Saingy miala avy any New York City mankany amin'ny tanàna sy vohitra amin'ny firenentsika. Olona maro no mampiavaka ny zaridaina sy ny tontolo maitso rehefa mikaroka trano na trano. Tsy mahagaga raha mahatsapa ho tena mahazo aina ianao ao anatinà tanimbolin'ny voninkazo mamelana, mitsotra ianao ary manadino ny alahelonao amin'ny fiainana andavanandro.
Ny vanim-potoana - mahatalanjona ny natiora
Nefa tsy ny fahavaratra ihany no mahatonga ny fonay hikoriana haingana kokoa. Samy manana ny toetrany sy ny toetrany ny fizaran-taona tsirairay. Ny ala mando sy ny hazo amin'ny ririnina dia manaraka ny ranomasina mavo, mena ary mena amin'ny fararano. Rehefa mihamafana ny andro, dia mitsimoka avy amin'ny hazo matevina ireo tsimok'andoha voalohany ary manomboka mamelatra ny hatsaran'izy ireo ny zavamaniry voalohany.
Ary na dia ao amin'ny rindrina efatra misy antsika aza dia tsy sahy manao zavatra tsy misy karazam-borona. Manomboka amin'ny zavamaniry kely voapotsitra amin'ny zavamaniry misy rano ao amin'ny akquarium mankany amin'ny palmie avo palma, saika ny tsirairay avy amintsika dia manana zavamaniry toy ny fanaka ao an-tranonay. Amin'ny maha-zavakanto azy, na dia karazana kopia noforonina fotsiny aza ny endriky ny zavamaniry, dia vitsy amintsika ihany no te hanao tsy misy.
Tsy misy na inona na inona, sary an-tsary maro koa no natao tamin'ny loko marevaka. Na dia sary tsy manala baraka ny natiora tsara tarehy aza, dia manana fiangaviana manokana manokana ary tsy ao amin'ny ankamaroan'ny trano fonenantsika ihany. Indrindra indrindra eo amin'ny ordinatera na ny smartphone ireo sarin'ireo zavamaniry sy hazo mahafinaritra antsika dia faly loatra amin'ny fampiasana azy.
Noho izany antony izany, dia faly isika mampiseho sary vitsivitsy ahitana zavamaniry eto ambany.
Mazava ho azy fa tsy afaka manolo tanteraka ny tena ny sary. Raha te-hiaina ny loko marevaka sy samihafa amin'ny natiora amin'ny fomba feno ianareo, dia tokony handeha any amin'ny rivotra madio. Ny sary amin'ny zavamaniry ao amin'ny tranokalanay, na izany aza, dia tsara ho an'ny taona mangatsiaka sy mena ary afaka mitondra tokantrano natokana ho an'ny olona avy amin'ny tanàna lehibe izay tsy miaina any ambanivohitra.
Thistle miaraka amin'ny tantely
Sary fanangonana sary